‘मलाया एक्सप्रेस’ ः सत्य र तथ्यमा आधारित नेपाली समाजको कथा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘मलाया एक्सप्रेस’ ः सत्य र तथ्यमा आधारित नेपाली समाजको कथा
२०७० मंसिर २९, शनिबार ०३:१५ गते
समयले मलाई पनि लेखक बनायो । लेखक बनेपछि स्रष्टा मात्र भइने रहेनछ, द्रष्टा पनि भइने रहेछ । आज स्रष्टाको होइन, द्रष्टाको काम गर्दैछु । प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीको अन्तर्वार्ता पढेँ, अभिव्यक्ति १६८ मा । यी महागुरूको र मेरो धारणा यो विषयमा समालोचनाको सन्दर्भमा मिल्यो । नेपाली साहित्यमा समालोचना अर्थात्, पुस्तक समीक्षा अनेक किसिमबाट गरिन्छ । म स्वयम् पनि निकृष्ट समीक्षाको शिकार भएको छु । थाहा छैन मलाई, ती विवेकहीन समीक्षकहरु लेखकमाथि छुरी धस्दा किन आनन्द अनुभूत गर्दछन् ! यस्तो लाग्छ, ती सारै नै दरिद्र मानिसकताबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् र तिनीहरुको यात्रा जहिले पनि नकारात्मकतादेखि नकारात्मकतासम्म नै हुन्छ । मेरो ध्येय उज्यालोको अन्वेषण हो । म हरेक किताब पढ्छु, फेला पारेसम्म र छिःछिः कहिल्यै भन्दिनँ । यो मेरो आफ्नै पन हो । कम से कम एउटा पुस्तक लेख्ने काम भयो, यसैलाई म उपलब्धि ठान्दछु । यसको अर्थ प्रशंसा नै प्रशंसा गर्नुपर्दछ र अन्धभक्त हुनुपर्दछ भन्ने पनि छैन । म त्यसरी चरणदास भएर भाटगिरी गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई पनि स्वीकार्दिनँ । म दुवैथरी अतिवादबाट पर बस्न चाहन्छु । यत्ति हो, किताबको समीक्षा लेखेर म शत्रु कमाउन चाहन्नँ ।
अखण्ड भण्डारी र ‘भ्वाइस अफ दी भ्वाइसलेस’ एकअर्काका पर्यायवाची । दोस्रो पुस्तक ‘च्वाइस अफ दी च्वाइसलेस’ हुन पुग्यो उनको, ‘मलाया एक्सप्रेस’ । रोशन शेरचनको ‘धोबीघाट एक्सप्रेस’, उता, शाहरुख खानको ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, म पनि ‘सौराहा एक्सप्रेस’ लेखौँ कि भन्ने मुडमा पुगेको थिएँ । ‘मलाया एक्सप्रेस’ नचढीरहन सकिएन ।
भाषासँग मस्त खेलेको ठिटो, अखण्ड भण्डारी । भाषाले नतान्ने कुरै भएन । अनि, मूल पात्र जीतबहादुर । बिचरो जीतबहादुर जहाँ पनि हार्न पुगेको छ । आफैँलाई सम्झिएँ, मेरो नाम आजसम्म सार्थक हुन सकेको छ र ? यो उपन्यास सत्य र तथ्यमा आधारित नेपाली समाजकै कथा हो । सम्पूर्ण कथा जीतबहादुरकै वरिपरि घुम्दछ । गरिबीको चक्रव्यूह कति आनन्ददायी हुन्छ, त्यो भोग्नेलाई नै थाहा हुन्छ । दस वर्षे जनयुद्धलाई सिरानी हालेर धेरै–धेरै युद्ध लेखिए । यसमा पनि पाठकले त्यो सुगन्ध अनुभूत गर्न पाउँछ । जनयुद्ध सार्थक कि निरर्थक ? यो पनि बहसको विषय बन्न सक्दछ ।
सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ पढेपछि म जस्तो नागरिकको मनमा सुनामी लहर उत्पन्न भएको थियो भने राजनीतिमै होमिनेको हालत के भयो होला ? प्रस्ट छ, नेपाली समाजमा हुनुपर्ने कुराभन्दा नहुनु पर्ने कुरा बढी भएका छन् । त्यसैलाई मसला बनाएर सर्जकले आख्यान तयार गर्दछ । मलाई यस्तो लाग्छ, दस वर्षे जनयुद्धमाथि न्याय गरेर अझै कुनै आख्यान लेखिएकै छैन । सबैले आ–आफ्नो आस्थानुसार डम्फु बजाएका छन् । यस विषयमा म धेरै बोल्दिनँ । बरू, म एक्सप्रेस चढेरै मलेसिया पुग्छु ।
नेपालभित्र कत्ति पनि सम्भावना नदेखेपछि नेपालीका सन्तान जेट चढ्ने हुन् । नेपालमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेपछि चारैतिरबाट मार खाएको र हार खाएको जीतबहादुर पनि उड्छ । उड्न विवश हुन्छ । आमाको ममता र प्रियाको न्यायो अँगालोले पनि उसलाई रोक्न सक्दैन । के विदेश सोचेजस्तै आनन्ददायी हुन्छ ? तीन–तीन सन्तानलाई उडाएर बसेको छु, म पनि । मेरा सन्तानहरु राम्रै मुलुकमा छन् । क्यानडा र अस्टे«लिया मानवअधिकार भएकै सुरक्षित मुलुक हुन् । तैपनि, बेलामौकामा मेरो मन विचलित हुन्छ । झन् खाडी मुलुकहरु मलेसिया आदिबाट आएका रून्चे ध्वनिहरुबाट के राहत अनुभूत गर्नु ? पराई आँगन वास्तवमै पराई नै हो ।
जीतबहादुरले पनि मलेसियामा पाउनु हन्डर पाउँछ । बल्ल–बल्ल ऊ काममा एडजस्ट हुन्छ र घर पैसा पठाउन थाल्दछ । अब यहाँनेर आउँछ, यौन । प्रिया मस्त जवान, राम्री पनि । उता जीतबहादुर पनि कम छैन । प्रियाको पढ्ने रहर छ, गाउँबाट सहर विराटनगरतिर । मान्छेको जीवनमा धेरै–धेरै संकटहरु हुन्छन् । यौन संकट एउटा विचित्र संकट हो । भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ, निद्रा लाग्छ भने त्यो पनि शरीरले खोज्दछ । अहिले नेपाली समाजमा पति र पत्नी छुट्टिएर बस्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यसले एउटा गम्भीर संकट खडा गरेको छ । कि त समाज यौनको मामिलामा अलि उदार हुनुप¥यो कि भने जोडीलाई छुट्टिन दिन भएन । यौन यस्तो मनोवैज्ञानिक समस्या हो, जसलाई भन्न पनि मिल्दैन र सहन पनि धेरै मुस्किल हुन्छ, असम्भव प्रायः ।
विपरीत लिंगीप्रतिको आकर्षण प्राकृतिक कुरा हो, सहजवृत्ति हो । यसलाई थुन्ने होइन, निकास दिने हो । यही विषयलाई लिएर बढी कुरा काट्दछन् हाम्रो समाज र बढी कुरा काट्नेहरु नै भित्रभित्र स्वाहा हुन्छन् । ‘मलाया एक्सप्रेस’ अलि–अलि ‘सेक्सप्रेस’ पनि भएको छ । उता, जीतबहादुर चिप्लिन्छ, यता डेनिसको जालमा प्रिया पनि थामिन्नन् । यो नेपाली समाजमा धेरै–धेरै जीतबहादुर र प्रियाहरु छन् । यो जीवनको गोप्य–शाखा हो । अँध्यारोमा कहाँ के हुन्छ, कसले थाहा पाउने ? नेपाली समाजले पनि यौनलाई पहाड होइन, तिल बनाए हुन्छ । इज्जतजस्तो कुरालाई लगेर त्यस्तो दुर्गन्धित स्थानसित जोडिदिन्छ, यो मानवसमाज ।
‘मलाया एक्सप्रेस’को कथानक नदी झैँ बगिरहन्छ । पाठकले हाई… गर्दै पढ्ने उपन्यास होइन यो । त्यसैगरी, सारै नै उच्चकोटिको मास्टर–पिस भनेर अखण्ड भण्डारीलाई नक्कली प्रशंसाको शिकार पनि बनाउनु हुँदैन । उनले जे देखे, त्यो लेखे । सबैले गर्ने त्यही नै हो । नेपाली समाजले भोगेको पनि त्यही हो । लेखक कुनै अर्कै लोकबाट आएको विशिष्ट प्राणी होइन । लेखकको विशिष्टता भनेको उसको भाषा, शैली हो । अपार सम्भावना भएका लेखक हुन्, भण्डारी अखण्ड । देश खण्ड–खण्ड हुन लागेको अवस्थामा नेपाली साहित्यलाई अखण्डजस्ता सर्जकको खाँचो पर्दछ । उनले आफ्नो साहित्यिक पाचनप्रणाली बलियो बनाउनुपर्दछ । साहित्यमा लागेपछि मान्छे सहनशील हुनुपर्दछ । कतैबाट हर्रो, बर्रो, टर्रो, तीते करेली आएछ भने त्यसलाई पनि प्रसाद सम्झिएर ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
उपन्यास ‘मलाया एक्सप्रेस’ की आमा वास्तवमै आदर्श आमा हुन् । यी आमा कतै नेपाल आमा त होइनन् ? आमाको सहनशीलता स्तूत्य र अनुकरणीय छ । वस्तुगत समीक्षा गर्न कस्सिएको होइन म । यो छोटो–छोटो टिप्पणी हो, अल्छी कार्यकर्ता चुनावमा खटिएजस्तै । अल्छी प्राध्यापकले लटरपटर कोर्स भ्याएजस्तै । यसलाई समालोचना वा समीक्षा नठानिदिनुहोला । ‘मलाया एक्सप्रेस’ समयको स्वर हो । समकालीनता यसको विशेषता हो । राजनीतिले समाजमा सिर्जना गरेको अन्योलमाथि शब्द–वाण प्रहार गरिएको छ । पाठकमैत्री बनाउन हो वा कथा नै त्यस्तै भएर हो, जीतबहादुरले सम्पूर्ण दाउहरु हारेर पनि अन्तमा बाजी मारेको छ । चलचित्र शैलीमा टुंगिन्छ उपन्यास । डेनिसले प्रियालाई, प्रियाको जीवनलाई तहसनहस बनाउन पाउँदैन । भ्रष्ट प्रहरी र इमानदार प्रहरीको चरित्र चित्रण रमाइलै छ । हाम्रा प्रहरी जवानहरु सबै भ्रष्ट छैनन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैगरी, सबै राजनीतिज्ञहरुलाई खत्तम भन्न पनि न्याय हुँदैन । राजनीति आफैँमा खराब होइन । जीतबहादुरले अन्तमा देशमै भविष्य सुरक्षित देखेको छ । अखण्ड भण्डारीले उपन्यासलाई आफ्नो जीवनसित पनि जोडेका छन् । म स्वयम् पनि उपन्यास लेख्न कस्सिएको मान्छे हो । एउटी सुत्केरीले अर्की सुत्केरीको व्यथा राम्रैसित अनुभूत गर्छिन् नै । म यहाँ उपदेशक बन्दिनँ । समष्टिमा भन्दछु– घटना, पात्र, परिवेश सबै हाम्रै वरिपरिकै भएकाले उपन्यास पढेजस्तो लाग्दैन, आफैँले भोगेजस्तो लाग्दछ । कुन्नि किन हो, म माओवादीप्रति कहिल्यै पनि त्यति अनुदार हुन सकिनँ । जीवनमा स्वयम्ले पनि यति धेरै अन्याय सहेँ कि कुनै कालखण्डमा जंगल पसौँ–पसौँ भएकै हो । तर, मभित्रको गजलकारले मलाई त्यो अग्निपथमा जानबाट रोक्यो ।
जहाँ विद्रोह हुन्छ, त्यहाँ सत्यता पनि हुन्छ । हरेक समय हिजोको समयको योगफल हो । हामी ‘मलाया एक्सप्रेस’ पढेर घाटामा रहँदैनौँ । कम से कम विदेशिएका नेपालीहरुलाई स्वदेशमै फर्काउने सुखद सन्देश दिन यो उपन्यास सफल भएको छ । नपढ्नेहरुले किताब किनेर पढ्दा हुन्छ ।